Maxaa dhici kara haddii Trump uu diido inuu xilka wareejiyo? |
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa diiday inuu xaqiijiyo inuu si nabad uu xilka ku wareejin doono haddii laga guuleysto doorashada bisha Nofembar ka dhaceysa dalka Mareykanka.
Wuxuu ku jawaabay “Waxaan si weyn cabasho uga qabaa qaabka codeynta”
“Meesha halaga saaro qaabkan codeynta ah- marka waxay u dhaceysa si nabad ah- mana jiri doonto xil wareejin, waxaa jiri doonaa is qabqabsi”
Koox ka tirsan Dimuqraadiga waxay sheegeen in Mareykanka ay ka jirto dowlad Aqalka Cad ka saari karto kuwo ku hamiya inay si sharci darro ku sii joogaan.
Qaar kamid ah warbaahinta maxalliga ee Mareykanka ayaa kusoo warramay in haddii madaxweynaha uu dhamaado muddo xileedkiisa ama xilka laga qaado balse uu ku adkeysto in uu xafiiska sii joogo uu weynaya awoodda uu ku amro ilaalada madaxweynaha ama dhammaan ciidamada Mareykanka ee ka amar qaata.
Inkastoo madaxweyne walba oo Mareykan ah marka uu xilka ka dego xaq u leeyahay in la siiyo ilaalada madaxweynaha ee loo yaqaano Secret Service, haddana taas kama hor-istaageyso in xafiiska laga saaro.
Marka la eego sooyaalka taariikheed ee Mareykanka, natiijada doorashada madaxtinimada Mareykanka ma noqon karta mid dhibaato u horseedo Mareykanka, waana arrin naadir ah in lagu murmo.
Dastuurka Mareykanka waxaa uu dhigayaa in marka hore madaxweyne xil haya uusan awood u lahayn in doorasho uu ku tilmaamo mid aan waxba ka jirin, sidoo kalena walaac walba oo laga muujiyo doorashada, maamulada gobollada Mareyanka ee maamula guddiga doorashada ay awood u leeyihiin inay baaritana ku sameyaan haddiiba ay jirto eedeyn ah wax isdaba marin dhanka doorashada ah.
Waxaa adag ama naadir ah in marka baaritaan la sameeyo wax laga badelo natiijada doorashada, maadaam marka horeba ay adag tahay in la sameeyo wax isadab marin dhanka doorashada Mareykanka ah.